သူများတော့မသိဘူး ဒို့ တော့ 500 တက်သွားပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » သူများတော့မသိဘူး ဒို့ တော့ 500 တက်သွားပြီ
သူများတော့မသိဘူး ဒို့ တော့ 500 တက်သွားပြီ
Posted by Shwemannmay on May 6, 2010 in Other - Non Channelized |6comments
သိပ်မကြာသေးတဲ့ကာလအတွင်းတုန်းက ရန်ကုန်မြို့ က အထူးကုဆေးခန်းကြီးတစ်ခု ရဲ့ကျန်းမာေ၇းဝန်ဆောင်မှူ နဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဂျာနယ်တွေ ဘလော့ဂ်တွေ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဝေဖန်သံတွေ ၊အကြံပြုသံတွေနဲ့ ဆူညံခဲ့ဘူးတာ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ အစိုးရဆေးရုံကြီးတွေမှာရော ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းတွေမှာပါ ဆရာဝန်လေးများ ၊အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ အပါအ၀င် ကျန်းမာရေးဝန်တမ်းများ အားလုံးဘက်က ဆက်ဆံရေးကအစ ကုသမှူအဆုံး တတ်နိုင်သမျှ အမှားအယွင်းကင်းအောင် အထူးသတိထားလာကြတာကိုတွေ့ လာရပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း အားလုံးပြန်လည်ငြိမ်သက်အေးဆေးသွားခဲ့ပါတယ် ။
မနေ့ ကသူငယ်ချင်းက အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ သွားပြတာမှာ အဖော်လိုက်သွားတော့မှ CF ကြေးက ၄၅၀၀ ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ အရင်ကကိုယ်သိထားတာ ၄၀၀၀ ပါ။ သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်တော့ အရင်လကတည်းကတက်သွားတာလို့ ပြောပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ CF ကြေး ကလည်း ကုန်ဈေးနှူန်းလိုပါပဲလားလို့ အောက်မေ့မိတယ် ။ ပွဲဆူပြီး နောက်ဆို ဈေးတက်တက်တာ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတင်မှမပာုတ်ပါလားနော်။ ဆေးဖိုးတွေတောင်မပါသေးဘူး ဆရာဝန်ခကို က ၄၅၀၀ ဆိုတော့ သာမန်လက်လုပ်လက်စားများအတွက်ဆိုရင်တော့ ၀ါးခကို က ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမှာအမှန်ပါပဲ ။ လက်လုပ်လက်စားတောင်မပာုတ်ပါဘူး သာမန်ရိုးရိုးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက်တောင် ၄၅၀၀ ဆိုတာမနည်းတဲ့ ပမာဏပါ ။ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝဆိုတာလို သင့်တင့်တဲ့ သမားခလေးတော့ဖြစ်သင့်တယ်ထင်တာပဲနော်။
ဘတ်စ်ကားခ ဘယ်စီးစီး၃၀၀ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလန့်နေတာ
တစ်ခုတော.ပြောချင်ပါတယ် အတတ်ပညာတစ်ခုတတ်မြောက်ဘို. ဆိုတာ လူရောငွေရောကုန်မှတတ်တာပါ။
ဒီတော.အတတ်ပညာနဲ.ပါတ်သက်တဲ.လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ငွေနဲ.ဘဲလိုက်လို.မတိုင်းတာချင်ပါနဲ.လို.တော. ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကိုပေါက်ပြောသလိုပါပဲ ။ ပေးရတာနဲ့တူညီတဲ့ဝန်ဆောင်မှူပေးနိုင်ဖို့က အဓိကပါဘဲ ။
တစ်ချို့လည်း ဈေးကြီးပြီး ၀န်ဆောင်မှူကောင်းကောင်းပေးကြတယ် ။ တစ်ချို့လည်း ၀န်ဆောင်မှူက မကောင်းပဲ သူများတွေဈေးတတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ယူတယ် ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ……ပေးရသလောက်နဲ့တန်အောင်တော့ ၀န်ဆောင်မှူ ရသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
အဲဒါလည်းပာုတ်တာပဲနော် လေးပေါက် ။ ငွေနဲ့ တိုင်းတာတာတော့မပာုတ်ပါဘူး။တစ်ချို့ သောဆရာဝန်ကြီး ၊ ဆရာဝန်မကြီးတွေဆီကနေပြီး စေတနာပါပတဲ့ကုသမှူတွေ အကြံပေးမှူ လမ်းညွှန်မှုတွေလည်း ရဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ ဒီလို အချိန်တွေ ငွေတွေ ကုန်လူပင်ပန်းခံပြီး တတ်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတာမှာ ဘယ်လိုပြောမလဲ ရှဉ့် လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ရွှေမန်းမေတော့ ထင်တာပဲ လေးပေါက်ရယ်
ဟုတ်တယ် ကားခတက်မှာတော့ ကြောက်တယ်
ခုတောင် ကားခချည်းပဲတနေ့ ၅၀၀ လောက်အနဲဆုံးကုန်နေတာ
ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အချိန် ငွေ များစွာရင်းနှီးရတာမှန်ပါတယ်
၁၉၆၀ကျော် ၁၉၇၀ကျော်လောက်က ဆေးကျောင်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာဝန်တွေဟာ
၁၉၇၀လောက်က အထူးကုနဲ့ ယခုခေတ်အထူးကုဝင်ငွေချင်းယုဉ်ကြည့်ရင်